I-Seychelles yamkela kwakhona i-Air France
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-Seychelles yamkela kwakhona i-Air France
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 31, 2019
I-Seychelles yamkela kwakhona i-Air France.
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe kunye nobomvu weAir France Airbus A330-200 yamkelwe ngumsitho wamanzi e-canon Seytshels Isikhululo senqwelomoya, imizuzu embalwa ngaphambi kwe-6 kusasa ngo-Okthobha u-30, 2019, emva kokungabikho kweminyaka engama-23.
I-Air France ngaphambili yayisebenza ngenkxaso-mali yayo, i-JOON, kwaye ngoku ibhabha imibala yayo yesizwe kwakhona.
Ukubuya kweAir France kudala ikhonkco ngqo phakathi kweSeychelles kunye nemarike yaseFrance, intengiso ebalulekileyo yelizwe. Isiqithi separadesi siyathandwa kwimakethi yaseFrance ngemeko yaso yetropiki kunye nesiFrentshi esiqhelekileyo, nolunye lweelwimi ezisemthethweni zelizwe. Njengelungu eliphambili leqela leSkyteam Alliance kwaye ineenqwelomoya ezisebenza ukuya kwiindawo ezili-195, iAir France iya kuba negalelo elibonakalayo kwicandelo lezokhenketho laseSeychelles.
“Ukufika kweAir France kunxweme lwethu kwakhona ayilothuba kuphela kodwa lilungelo lendawo esiya kuyo. Siyavuya ukwamkela inqwelo moya emva kweminyaka engama-25 bengekho, kwaye sonwabile ukuba abathengi bethu baseFrance bazokwazi ukufikelela ngenqwelomoya ngqo eSeychelles, utshilo uNksk. Francis, iBhodi yoKhenketho yaseSeychelles (STB).
Ethetha ngalo msitho, umphathiswa wezokhenketho, ezokundiza, ezokuloba kunye nezolwandle uMnu Didier Dogley uthe "ukubuya kweAir France, umphathi wenqwelomoya waseFrance, kubalulekile kuba iSeychelles ngoku inikezelwa ngeenqwelomoya ngqo ukuya nokubuya eYurophu. umphathi wesine wehlabathi. Oku kuyakuphucula kakhulu ukhuphiswano lwethu kwiimarike zaseFrance nezaseYurophu. Siyavuya kakhulu yilento intsha. ”
Ukusukela nge-Okthobha i-29, abathengi be-Air France bayakwazi ukuya eMahe nge-3 ngeeveki zeenqwelo moya ezisuka eParis-Charles de Gaulle. Ezi moya ziya kusebenza kulo lonke ixesha lasebusika ukusuka ngo-Okthobha ukuya kuMdlalo 28, 2020 kwi-Airbus A330-200.
Ukufumana ezinye iindaba malunga neSeychelles, nceda nqakraza apha.